Khudbaddii Farmaajo iyo Jawaabtii Soomaaliland | Togdheer News Network
Khudbaddii Farmaajo iyo Jawaabtii Soomaaliland
Sidii Dowladda Xamar u Caadada aheyd waxa laga xusey 26June
oo ku beegneyd markii Soomaaliland Xorriyadeedda ka heshay Dowladdii ingriiska.Nin Waalan ayaa Lixdankii maqley Soomaali Xorriyad baa la siisey markaasuu ku jawaabey Fasax baa la isu siiyey.
Taasi oo micnaheedu yahey Sooomaalidu iyadaa isu dowladadeynaysa sidii baana dhacdey.koofur markii aynu isku darsanneyba wey inoo dowladeeyeen waxaaney qaateen
4:Wasiirradii oo dhan,
sida Arrimaha Gudaha, Dibadda, Gaashaandhiga. Soomaalilandna waxa loo bixiyey Gobolka waqooyi Galbeed.
Waxa Xigey Dowladdi Maxamed Siyaad Barre iyana Ku dheeraan maayo Burburkii dhacey.ilaa maanta oo aaney cago ku taagneyn Dowladda Xamar ka jirta ayaaney garwaaqsaneyn khaladaadkii ka dhashey midowgii Soomaaliland iyo Soomaalia 1July 1960.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galey dabbaal-deggii Sannadkan Xamar loogu sameeyey 26June.Halkaana waxa uu ka akhriyey khudabad u muuqatey in aan la soo diyaarin oo Boob-siisa.
Haddaba waxa iga yaabisey dhinaca soomaaliland sida is-barbaryaaca aheyd ee loogu jawaabey oo aad moodasey mid Jaan-taa rogan ah.
waxa TV da ka hadley Masuuliyiin aaD u tiro badan.Sida,
Xisbiga Muraaridka ah ee UCID.
Guurtida oo uu hadley Xildhibaan Dheeg.
wasiirka madaxtooyada maxamoud Xaashi.
Aqoonyahan Boobe yousuf Ducaale iyo Qaar kale oo badan.
waxaase ku habboonaa jawaabta la Siinayo Farmaajo ama Xamarba Xukuumadda Soomaaliland oo qudha. Weliba Wasiirada Arrimaha debedda ama Warfaafinta. Waxa habbooneyd in looga danbeeyo Xukuumadda in ay Jawaab Cad ka bixiso Arrimaha sidan oo kale ah.Laakiin Waxaad mooddaa in aaney inoo kala soocneyn Qof kasta Shaqadii loo igmadey
Madaxwayne Farmaajo Oo Isugu Yeedhay Gudida Amniga Qaranka
Diwaan Galinta Xubinimada Xisbiga Waddani Oo Boorama Laga Daah Furay
Waxyaabihii Ay Ka Wadda Hadleen Madaxwayne Biixi iyo Safiirka UK
Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed oo booqasho ku tagaya magaalada Minneapolis
Michael Keating ” Labo sanno ka hor garoonka diyaaradaha uma dhaafin Gaalkacyo
James McClean: Stoke City sign West Bromwich Albion winger for initial £5m
Dunfermline beat Dundee in Scottish League Cup
Rangers sign Kent on loan from Liverpool